कुखुराको (भाले) फेंगशुईल सकारात्मकताको साथ आत्मविश्वास बढाउँदछ – Sajha Pati
कुखुराको (भाले) फेंगशुईल सकारात्मकताको साथ आत्मविश्वास बढाउँदछ
फेगशुईमा कुखुरालाई साहसको प्रतीक मानिन्छ, यसले घरको खराबी हटाउँदछ । फेगशुई चीनको आर्किटेक्चर हो । यो शिक्षा अन्य देशहरुमा पनि प्रचलित छ । चराहरूलाई पनि यसमा भाग्यशाली मानिन्छ । फेगशुई विज्ञ शीला एम. बजाजका अनुसार फेगशुई ग्याजेटहरू घरमा राख्दा धेरै कमजोरीहरू हटाउन सकिन्छ र शुभ प्रभावहरूले हाम्रो विश्वास बढाउन सक्छ ।
फेगशुइ सुझावहरू (टिप्स)ले काम गर्न सक्दछ । यदि तपाईं कडा परिश्रम पछि पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुन्न । फेगशुर्ईमा कुखुरा –भाले)लाई धेरै नै शुभ मानिन्छ । यसको मूर्ति घर वा अफिसमा राख्न सकिन्छ । घर वा कार्यस्थलमा कुखुरा –भाले)को फेगशुई राख्दा नकारात्मक उर्जा प्रभाव कम हुन्छ । सकारात्मक उर्जा बढ्छ । फेगशुई साहस, निर्भरता, आत्मनिर्भरता र लगनशीलताको प्रतीक मानिन्छ । यसले सफलता प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ ।
कुखुरा धेरै वफादार मानिन्छ । तिनीहरू हाम्रो स्वास्थ्य, काम र सम्बन्धमा समस्याहरूमा नजर राख्छन् र तिनीहरूलाई तपाईंसम्म पुग्न पूर्ण रूपमा रोक्दछ । फेगशुई अफिसमा तपाइँको टेबुलमा राख्नुपर्दछ । यसले तपाईंलाई अन्य व्यक्तिहरू भन्दा बढी फाइदा दिन सक्छ । व्यापारको अवरोध पार गर्न सकिन्छ ।
घरमा, यसलाई ओछ्यानको नजिकमा राख्नु पर्छ । यसको शुभ प्रभावका कारण परिवारमा सद्भाव बढ्छ । दिमाग शान्त रहन्छ र यसले घरको सुन्दरता पनि बढाउँछ । जो आफ्नो दुश्मनहरुबाट परेशान छ भने घरमा कुखुरा –भाले)को फेगशुई राख्नु पर्छ । यसले साहस बढाउँदछ । अज्ञात डर समाप्त हुन्छ । दुश्मनको योजना विफल पार्न शक्ति आउछ ।
पहेलो रंग र बिहीबार किन शुभ मानिन्छ ?
अल्जाइमर Alzheimer’s Disease in Nepali
युवाहरूमा हृदयघातको जोखिम किन बढ्दैछ ? कोडिओलजिस्ट डा. सन्तोष कुमार डोरा
डेंगूका लक्ष्यहरू पहिचान र डेङ्गुबाट बच्न सरल उपायहरु
आँसु थेरापी : आँसु थेरपीले दुखाइ र तनाव कम गर्दछ, बुझौं आँसु बग्न दिनु जिवनमा किन महत्त्वपूर्ण छ